Inqubomgomo Yobumfihlo - I-Hielscher Ultrasound Technology
Le nqubomgomo yobumfihlo ihlanganiswe ukuze isebenze kangcono labo abathintekayo ngokuthi 'Ulwazi lwabo olubonakalayo lomuntu’ (PII) isetshenziselwa ku-intanethi. I-PII, njengoba kuchaziwe kumthetho wobumfihlo wobunikazi wase-US nokuphepha kolwazi, ulwazi olungasetshenziswa yedwa noma ngolunye ulwazi ukukhomba, ukuxhumana, noma ukuthola umuntu oyedwa, noma ukukhomba umuntu kumongo. Sicela ufunde inqubomgomo yethu yobumfihlo ngokucophelela ukuze uthole ukuqonda okucacile ukuthi siqoqa kanjani, sisebenzise, ​​sivikele noma sisebenzise ngenye imininingwane Ulwazi lwakho olubonakalayo lomuntu ngokuhambisana newebsite yethu.
Uma uhlela noma ubhalisa kusayithi lethu, uma kufanelekile, ungacelwa ukuthi ufake igama lakho, ikheli le-imeyli, inombolo yocingo noma eminye imininingwane ukukusiza ngolwazi lwakho.
Siqoqa ulwazi kuwe uma ugcwalisa ifomu noma ufaka ulwazi kusayithi lethu.
Ukuze ulandele nabo ngemuva kwezingxoxo (bukhoma ingxoxo, i-imeyili noma imibuzo yefoni)
Ukwaziswa kwakho komuntu siqu kuqukethe amanethiwekhi avikelekile futhi kufinyeleleka kuphela ngenani elinganiselwe labantu abanamalungelo okufinyelela okukhethekile kulezi zinhlelo, futhi kudingeka ukuba ulwazi luyimfihlo. Ngaphezu kwalokho, lonke ulwazi olubucayi / lwekhredithi oyinikezayo lubethelwe nge-Technology Secure Socket Layer (SSL).
Sisebenzisa izindlela ezahlukene zokuphepha uma umsebenzisi angena, athumela, noma afinyelele ulwazi lwakhe ukugcina ukuphepha kolwazi lwakho lomuntu siqu.
Sisebenzisa amakhukhi ukuhlanganisa idatha ehlanganisiwe mayelana nesitembu se-traffic kanye nokusebenzisana kwesayithi ukuze unikeze ama-site angcono namathuluzi wesayithi esikhathini esizayo. Singasebenzisa nezinsizakalo ezithembekile zenkampani yangaphandle ezilandelela lolu lwazi esikhundleni sethu.
Uma uvala amakhukhi, ngeke kuthinte isipiliyoni somsebenzisi.
Asifaki noma sinikeza imikhiqizo noma izinsizakalo zenkampani yangaphandle kwi-website yethu.
Izidingo zokukhangisa ze-Google zingafingqwa Izimiso Zokukhangisa ze-Google. Zibekiwe ukuze zinikeze ulwazi oluhle kubasebenzisi.
Sisebenzise lokhu okulandelayo: Ukubika kwabantu abathintekayo
I-CalOPPA ngumthetho wokuqala wombuso esizweni ukuze udinga amawebhusayithi okuhweba nezinsizakalo ze-intanethi ukuthumela inqubomgomo yobumfihlo. Ukufinyelela komthetho kudlula ngaphesheya kweCalifornia ukufuna noma yikuphi umuntu noma inkampani e-United States (futhi ngokusobala ukuthi umhlaba) osebenza kumawebhusayithi eqoqa ulwazi olubonakalayo oluvela kubantu baseCalifornia ukuthumela inqubomgomo yobumfihlo ebonakalayo kwiwebhusayithi yayo echaza ngqo ulwazi oluqoqwe nalabo abantu ngabanye noma izinkampani esabelana ngazo. – Bona okuningi ku: https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Isixhumanisi sethu seNqubomgomo Yobumfihlo sihlanganisa igama elithi 'Ubumfihlo’ futhi ingatholakala kalula ekhasini elichazwe ngenhla.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi asivumeli ukulandelela ukuziphatha komuntu wesithathu
Uma kuziwa ekuqoqweni kolwazi lomuntu siqu kusuka ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13 ubudala, umthetho we-Children's Online Protection Protection Act (COPPA) ubeka abazali ukulawula. I-Federal Trade Commission, e-United States’ i-ejensi yokuvikelwa kwabathengi, iqinisa i-COPPA Rule, echaza ukuthi yiziphi abasebenzisi bamawebhusayithi kanye nezinsizakalo ze-inthanethi okumelwe zenze ukuze zivikele ubumfihlo bezingane nokuphepha ku-inthanethi.
Asihambisani ngokuqondile nabantwana abangaphansi kweminyaka engu-13 ubudala.
Sizokukwazisa nge-imeyili kungakapheli izinsuku ezingu-7 zebhizinisi
Sizokwazisa abasebenzisi ngesaziso esiteshini kungakapheli usuku lwebhizinisi elingu-1
Siqoqa ikheli lakho le-imeyili ukuze ususe ulwazi, uphendule imibuzo, kanye / noma ezinye izicelo noma imibuzo
Ungasebenzisi izihloko ezingamanga noma ezidukisayo noma amakheli we-imeyili.
Thola umyalezo njengesikhangiso ngendlela enengqondo.
Faka ikheli langempela lebhizinisi lethu noma indlunkulu yesayithi.
Gada amasevisi wokumaketha we-imeyili we-third party ukuze ulandele, uma esisetshenziswa.
Hlonipha izicelo zokuphuma / ukuzikhipha ohlwini ngokushesha.
Vumela abasebenzisi ukuba bazikhiphe ohlwini ngokusebenzisa isixhumanisi phansi kwe-imeyili ngayinye.
Uma nganoma yisiphi isikhathi ungathanda ukuzikhiphe ohlwini ngokuthola ama-imeyili esizayo, ungasithumela i-imeyili ku- info@hielscher.com futhi sizokususa ngokushesha kuzo zonke izincwadi.
145131 iTeltow, eJalimane
Kugcine ukuhlelwa ngoMeyi, 24th 2018.